Komishanka Doorashooyinka oo Amarro Culus ka soo Saaray Dhaqdhaaqyada Ololaha Xisbiyada | Dhamays Media Group
Komishanka Doorashooyinka oo Amarro Culus ka soo Saaray Dhaqdhaaqyada Ololaha Xisbiyada
“Culimada diinta mid ayaannu ka leennahay, wareeggii hore waynu aragnaa, waa laga badbadiyey, xisbiyaduna way ka-yara badbadiyeen oo taageerayaashooda may xakameyn, markaa waxaannu idinka codsanaynaa….” Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka
Hargeysa (Dhamays) – Komishanka Doorashooyinka Qaranka Dhamayshuuriyadda Somaliland, ayaa amarro culus ka soo saaray dhaqdhaqaaqyada ololeyaasha doorashada ee saddexda xisbi qaran oo maalintiisii saddexaad galay Salaasada maanta.
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Eng. Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo shir-jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa, waxa uu saddexda xisbi iyo taageerayaashooda ka mamnuucay gebi ahaanba dhaqdhaaqyo olole ka sameeyaan xilliyada habeenkii magaalooyinka kala duwan ee dalka.
Guddoomiye Iimaan waxa kaloo uu sheegay in isu-soo-baxyadii taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee WADDANI oo ka qabsoomay magaalooyinka dalka, gaar ahaan caasimadda Hargeysa shalay ay ka dhasheen buuq iyo saxmad aan loo baahnayn oo sababtay in suuqyada qaarkood la boobo, ganacsiyo badanna xidhmaan.
Ugu horreyn, Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka oo faahfaahinayey qorshe cusub oo ay ku xakamaynayaan dhadhaqaaqyada ololeyaasha axsaabta siyaasadda ee u tartamaya doorashada Madaxtooyada ee u muddaysan 13-ka bisha November ee soo socota, waxa uu yidhi; “Xeerka Doorashada Madaxtooyada ee lambar 20/2001, qodobkiisa 33aad ee u fasaxayey xisbiyada inay waqti cayim ololeeyaan, ayaannu wax ka beddelnay, kadib;
Markii aannu aragnay: saddexdii habeen ee ina soo dhaafay in anshax-xumo iyo anshax aan loogu talogelin dhacay, socod aan loogu talogelin dhacay. Waxaannu soo rognay in xisbiyadu in aannu waqti siinno ay ku diyaar-garoobaan habeenkii si ay subaxnimada ololahooda u bilaabaan, oo imminka UCID caawa [xalay] ku diyaar-garoobayso.
Laga bilaabo 8:00PM habeennimo – 10:00PM habeennimo xisbiga berrito [maanta] leh diyaar-garow ayaa loogu talogalay ah gudaha xafiisyadooda ah iyo hudheellada hadday ku qabsanayaan diyaar-garowgaas.
Looguma talogelin laga bilaabo 6:00PM galabnimo – 8:00PM habeennimo. Ma jiri doono dhaqdhaqaaq dambe oo xisbi oo magaalada rabsheynaya, oo dhakhtarradii dadkii xannuunsanayey wareerinaya, oo laga tukan kari waayey masaajidadii, oo suuqyadii laga adeegsan kari waayey. Waxyaabaha soo baxaya maanta [shalay] waxa aannu arkaynaa, in baayac-mushtarigii xidhmay oo xataa dadkii la boobay suuqyadii, in laga tukan kari waayey ayaannu arkaynaa, markaa waa in aannu anshaxa ilaalinno.
Waxa ololuhu yahay oo xisbiga berrito [maanta] bilaabaya wareeggii labaad oo UCID ah uu ka bilaabi doonaa 6:00AM subaxnimo – 6:00PM galabnimo. Laga bilaabo 6:00PM galabnimo lama oggola wax isu-socod ah oo qayrul-sharci ah, oo xeerka anshaxa ee ay kala saxeexdeen xisbiyada iyo Komishanka Doorashooyinku lama oggola 6:00PM galabnimo wixii la bilaabma.”
Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaas ku ladhay, “Xisbiga kale ee UCID ku xiga 8:00PM habeennimo oo ah KULMIYE ayuu bilaabayaa diyaar-garowgiisa. Haddaba, diyaar-garowga sidee ayuu u bilaabayaa? Waxa uu bilaabayaa 8:00PM habeennimo, waxa uu dhammeynayaa 10:00PM habeennimo. Waxa uu u bilaabayaa guryahooda ama xafiisyadooda ama hudheellada ay wax ku qabsanayaan, dhexdooda ayey isugu imanayaan, calamadooda ayey ku diyaarsanayaan, goobahooda ayey ku diyaarsanayaan, sticker-dooda ayey ku diyaarsanayaan, dhaqdhaqaaq dibedda ah oo inta calamo la qaato lama oggolaanayo, ha la joojiyo. Waa digniin weyn, waxaannu Taliyaha booliska u sheegnay, oo isaguna warbaahinta la hadlay maanta [shalay], in baabuurka wixii 8:00PM habeennimo ka dembeeya aan la oggoleyn in hoon la tumo, baabuurna la oggoleyn in 10 qof lagu fuulo/raaco, baabuurna la oggoleyn in socod xawaari ah oo qeyrul-macquul ah in magaalooyinka gudahooda iyo waddooyinka lagu maro lama oggola, oonna habeen lama oggola oo waa qeyrul-macquul.
Waxa aan la oggoleyn oo kale in sawaxan lagu sameeyo iyo wixii gaadiid ah ee sharci-darro ah ee ka baxsan sharcigaas aannu soo saarnay inay ku maraan magaalada, ama xawaare culus ha noqoto, ama dadka oo buuqaya ha noqoto, ama makarafoonno la saaray ha noqoto, waxaas oo dhan way ka reebban tahay laga bilaabo 6:00PM galabnimo wixii ka dambeeya.”
“Aan ku celiyo, 8:00PM habeennimo – 10:00PM habeennimo ayuu xisbiga berri [maanta] ololaha u leh uu diyaar-garowgiisa sameysanayaa, waxaannu ku sameysanayaa xafiisyadooda, hudheellada iyo guryahooda gudahooda oo isu-soo-bax ma jirayo, waana qeyrul-macquul, Jananka Bileyskana waannu siinnay amarkaas, waanuna wada qaadannay. Boolisku way xidhayaan, baabuurta way dhigayaan, lagama yeelayo hebel iyo hebel,” ayuu Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinku ku yidhi amarradiisa iyo digniinihiisa ku wajahan xakaymanta ololeyaasha doorashada ee xisbiyada qaranka.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Komishanka waxa uu farriin u diray culimaa’udiinka kala duwan ee Somaliland, “Culimada diinta mid ayaannu ka leennahay, wareeggii hore waynu aragnaa, waa laga badbadiyey, xisbiyaduna way ka-yara badbadiyeen oo taageerayaashooda may xakameyn, markaa waxaannu idinka codsanaynaa idinkana bal in aynu isku nimaadno, ka wada shirno sidii innaga oo gacmaha isku haysanna anshaxa u wada ilaalin lahayn, diintana u ilaalinayna ololahaas sida uu ku dhammaan lahaa,” ayuu yidhi Eng. Cabdulqaadir Iimaan oo si gaar ah ula hadlayey culimada dalka.
Previous: Murrashaxa WADDANI oo Ugu Baaqay Codbixiyeyaasha inay Taageeraan Isbeddelka iyo Horumarka Xisbigoodu Wado
Next: Sheekh Barbaraawi oo ka Digay Halista Ifka iyo Aakhiro Lagala Kulmi Karo Hadallada Fidmo-abuurka ah